सफल एआई डिप्लोइमेन्टको लागि आवश्यक सीपहरू - Victor Mochere
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हालैका वर्षहरूमा सबैभन्दा डरलाग्दो टेक्नोलोजीहरू मध्ये एकमा विकसित भएको छ। बिस्तारै, यो शक्तिशाली प्रविधिले व्यापार संसारमा ठूलो स्थान बनाएको छ। अधिकांश प्रमुख व्यवसायहरूको एआई प्रविधिहरूमा लगानी छ। तर, कम एआई क्षमताहरू तिनीहरूको काममा प्रयोग गर्छन्। यो किनभने एआई तैनाती एक ठूलो चुनौती हो। विशाल एआई क्षमताहरू र उपयुक्त व्यावसायिक डिग्री भएका पेशेवरहरूको माग उपलब्धता भन्दा धेरै छ।
आफ्नो कलेजमा AI पढेकाहरू पनि यस क्षेत्रमा सधैं निपुण हुदैनन्। स्रोतसाधन र उपयुक्त पूर्वाधारको अभाव यसका दुई प्रमुख कारण हुन् । यद्यपि, कहिलेकाहीँ पुस्तकहरू, अनलाइन पाठ्यक्रमहरू, आदि जस्ता स्रोतहरूबाट आत्म-सिक्नेहरूले उनीहरूको कलेज-शिक्षित समकक्षहरू भन्दा राम्रो AI क्षमताहरू विकास गर्छन्। यसले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नलाई जन्म दिन्छ, "उम्मेद्वारसँग साँचो एआई डिप्लोइमेन्ट सम्पत्ति बन्न आवश्यक सीप छ कि छैन भनेर कसरी निर्धारण गर्ने?"
यहाँ महत्वपूर्ण सीपहरू छन् जुन सफल एआई डिप्लोइमेन्टको लागि आवश्यक छ।
1. AI को क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिसँग सिक्ने, अनुकूलन गर्ने र स्ट्राइडहरू मिलाउने क्षमताहरू
2. डोमेन र क्षेत्र ज्ञान संग उद्योग विशेषज्ञता
3. शासन कौशल
२. सञ्चार कौशल
5. अनुपालन अभ्यासहरूको पूर्ण ज्ञान
प्रविधि सधैं विकसित हुँदैछ र AI कुनै अपवाद छैन। यस उच्च प्राविधिक र विकसित संसारमा प्रतिस्पर्धी हुनुको रहस्य भनेको आफूलाई निरन्तर रूपमा अपग्रेड गर्नु हो। त्यसैगरी, यदि तपाइँको संस्था AI परिनियोजनको क्षेत्रमा उत्कृष्ट बन्न चाहन्छ भने, यो AI पेशेवरहरूसँग सुसज्जित हुनुपर्छ जसले AI को क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिहरूसँग सिक्ने, अनुकूलन गर्ने र स्ट्राइडहरू मिलाउन सक्ने क्षमता राख्दछ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको क्षेत्रमा नयाँ एल्गोरिदम, उपकरण, रणनीतिहरू उदाइरहेका छन्।
यदि तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूले नवीनतम एल्गोरिदमहरू प्रयोग गर्छन् तर तपाइँको AI टोलीसँग तिनीहरूलाई सिक्न र प्रयोग गर्ने क्षमता छैन भने, स्पष्ट रूपमा तपाइँ पछाडि पर्नुहुनेछ। यसो भनिसकेपछि, तपाईंले नयाँ भाडामा वा तपाईंको एआई टोलीका सदस्यहरूसँग आत्म-सुधार र निरन्तर सिकाउने सीपहरू छन् कि छैनन् भनी जाँच गर्नुपर्छ। अब, यहाँ प्रश्न उठ्छ कि उम्मेदवारको सिकाउने क्षमता कसरी जाँच्ने? यसमा तपाईलाई मद्दत गर्नको लागि निम्न केही सूचकहरू छन्।
a उम्मेदवारले हासिल गरेका अतिरिक्त प्रमाणपत्रहरू निर्धारण गर्नुहोस्
उम्मेद्वारको सिकाइ क्षमताको स्पष्ट सूचक मध्ये एक हो उसले हासिल गरेको अतिरिक्त प्रमाणपत्रहरू। अतिरिक्त सीपहरू सिक्ने यात्रा सुरु गर्न सिक्ने बारे भावुक व्यक्तिहरू मात्र। अधिकांश व्यक्तिहरूले कलेजमा उनीहरूलाई सिकाइएको कुरा मात्र सिक्छन् र त्यस आधारमा काममा लिने आशा गर्छन्। तर, भावुक शिक्षार्थीहरू कलेजको पढाइमा रोकिँदैनन्, उनीहरूले आफ्नो सीप विस्तार गर्छन् र आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूमाथि स्पष्ट धार प्राप्त गर्छन्।
b अरूको विचार स्वीकार गर्न तिनीहरूको इच्छुकता जाँच गर्नुहोस्
राम्रो सिक्ने क्षमता भएकाहरू अरूको विचार स्वीकार गर्न खुला हुन्छन्। तिनीहरू आफ्नो विचार र विश्वासमा स्थिर हुँदैनन्। तिनीहरू नयाँ विचारहरू, दृष्टिकोणहरूका लागि खुला रहन्छन् र यदि तिनीहरूले नयाँ कुरा सिक्छन् भने आफ्नो विचार परिवर्तन गर्न इच्छुक छन्। उम्मेदवारको अरूको विचारलाई विचार गर्ने इच्छाको मूल्याङ्कन गर्न, तपाईंले उहाँलाई केही प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ।
यस्तो प्रश्नको एउटा उदाहरण हो, "तपाईको टोलीको सदस्यसँग कहिल्यै असहमति भएको छ? यदि हो भने, तपाईंले के गर्नुभयो वा तपाईंले यसलाई कसरी व्यवहार गर्नुभयो?" यसबाहेक, जब यो तपाइँको अवस्थित AI टोलीको कुरा आउँछ, तपाइँ तपाइँका कर्मचारीहरूको असहमतिलाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ वा तपाइँले उनीहरूलाई केहि नयाँ सिकाउने प्रयास गर्दा उनीहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् भनेर ध्यानपूर्वक हेरेर सिक्ने इच्छा निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
ग भविष्यका प्रयासहरूको बारेमा सोध्नुहोस्
यो सिक्ने को लागी कसैको जुनून निर्धारण गर्न को लागी एक उत्तम तरिका हो। उहाँको भविष्यका प्रयासहरूको बारेमा सोध्नुहोस्। यदि ती सिक्न वा विशेषज्ञता हासिल गर्न केहि समावेश छन् भने, उम्मेद्वार वा टोली सदस्य निश्चित रूपमा आफ्नो ज्ञानको विस्तारमा समर्पित छ।
AI अपरेसनहरू, एल्गोरिदमहरू र उपकरणहरूको उत्कृष्ट ज्ञानको साथसाथै, तपाईंको एआई डिप्लोइमेन्ट टोलीलाई सफल हुन आवश्यक पर्ने अरू केही छ। यो हो - डोमेन र क्षेत्र ज्ञान संग उद्योग विशेषज्ञता। यो तब मात्र हो जब तपाईंका AI विशेषज्ञहरूसँग तपाईंको उद्योग र डोमेनको महत्त्वपूर्ण ज्ञान हुन्छ कि तिनीहरूले तपाईंको व्यवसायलाई बलियो बनाउन सही एल्गोरिदमहरू बनाउन सक्छन्। तपाईंको डोमेन र क्षेत्रको उचित ज्ञान बिना, तिनीहरूको एल्गोरिदम आवश्यक भन्दा बढी जटिल हुन सक्छ।
स्वास्थ्य सेवा जस्ता संवेदनहीन क्षेत्रहरू, यी जटिलताहरू खतरनाक पनि हुन सक्छन्। त्रुटि र गलत व्याख्याले मानिसहरूको जीवन जोखिममा पार्न सक्छ। त्यो दिईएकोमा, ती AI विशेषज्ञहरूलाई काममा राख्नु उत्तम हुन्छ जसले तपाईंको उद्योग र तपाईंको डोमेनमा संलग्न जटिलताहरू राम्ररी जान्दछन्। यदि तिनीहरूले गर्दैनन् भने, यो तिनीहरूको सिकाउने क्षमतामा तल आउँछ जब यो तपाईंको AI डिप्लोइमेन्ट टोलीको लागि उत्कृष्ट फिट हुन आउँछ। एक राम्रो शिक्षार्थीसँग प्रभावकारी रूपमा सिक्ने र कुनै पनि परिस्थितिमा उत्कृष्ट हुन सक्ने क्षमता हुन्छ।
AI पूर्वाग्रह एक प्रमुख मुद्दा हो जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ जब यो AI तैनाती को लागी आउँछ। उदाहरणका लागि, लिङ्ग, जाति, धर्म, जातीय, इत्यादिको आधारमा कुनै पूर्वाग्रह बिना नै पहिचान प्रमाणिकरण प्रक्रियाहरूले सबैका लागि राम्रोसँग काम गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण छ। यदि AI पूर्वाग्रहहरू तपाईंको उत्पादनहरू, सेवाहरू, वा अन्य मेसिन उपकरणहरूमा अवस्थित छन् भने, यो महत्त्वपूर्ण छ। स्पष्ट रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण छ र तपाईंको संगठनलाई माथिको सट्टा तलतिर लैजान सक्छ।
AI पूर्वाग्रहलाई न्यूनीकरण गर्न, AI टोलीहरूका लागि प्रशासनिक सीपहरू हुनु महत्त्वपूर्ण छ। साथै, AI टोलीहरूले आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता बढाउन र सबै पक्षपातपूर्ण प्रवृत्तिहरूबाट छुटकारा पाउन प्रशासन ढाँचा उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। भविष्यमा AI को सफलता भेदभाव र पक्षपाती प्रवृत्तिलाई कत्तिको उन्मूलन गर्न सकिन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। त्यसलाई ध्यानमा राख्दै, तपाईंको एआई डिप्लोइमेन्ट टोलीलाई एआई पूर्वाग्रहसँग राम्रोसँग जान्नु पर्छ र शासन गर्ने सीपहरू हुनुपर्दछ।
एआई डिप्लोइमेन्ट टोलीहरूसँग उत्कृष्ट सञ्चार कौशल हुनुपर्छ। किन यस्तो हुन्छ ? राम्रो संचार भनेको टोलीका सदस्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अन्तरक्रिया गर्न र सँगै इच्छित परिणामहरू उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। कल्पना गर्नुहोस्, यदि तपाईंको एआई टोलीसँग प्रभावकारी सञ्चारको कमी छ भने, के यो कहिल्यै सुचारु हुन सक्छ? जवाफ स्पष्ट रूपमा ठूलो छैन।
रणनीतिक योजना, छलफल, र लगभग सबै कुरा राम्रो संचार कौशल आवश्यक छ। यसबाहेक, सबैसँग AI मा प्राविधिक विशेषज्ञता छैन। यो दिईएको छ कि, तपाइँका ग्राहकहरु वा टोलीका गैर-प्राविधिक सदस्यहरु संग अन्तरक्रिया गर्दा, AI ईन्जिनियरहरु लाई गैर-प्राविधिक तर राम्रोसँग बुझ्न सकिने तरिकामा कुराहरु व्याख्या गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।
त्यसकारण तपाईको एआई डिप्लोइमेन्ट टोलीसँग उत्कृष्ट सञ्चार सीपहरू हुनुपर्दछ। तपाईंले निश्चित रूपमा उम्मेद्वारलाई भर्ती गर्नु अघि उसको संचार कौशलको विश्लेषण गर्नुपर्छ। तिनीहरूसँग राम्रो सञ्चार कौशल नभए पनि, तर तिनीहरूसँग AI को राम्रो ज्ञान र छिट्टै सिक्ने क्षमता छ, तपाईंले तिनीहरूलाई काममा लिएपछि तिनीहरूको सञ्चार कौशल बढाउने काम गर्न सक्नुहुन्छ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एक अद्भूत प्रविधि हो। यसको विशाल पखेटाहरू छन् जसमा अपार सम्भावनाहरू छन्। यदि AI को प्रयोग निश्चित नियम र नियमहरूमा बाँधिएको छैन भने यसले व्यक्ति, समूह र समाजलाई पनि ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ। एआईले व्यक्तिको आधारभूत अधिकारलाई समेत उल्लङ्घन गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी, केहि पृष्ठभूमि र धर्महरु को लागी पक्षपाती AI उपकरणहरु मा आधारित स्क्रीनिंग पुन: सुरु गर्नुहोस् निश्चित रूप देखि अल्पसंख्यक समूहहरु को व्यक्तिहरु लाई खतरा हुन सक्छ।
त्यसलाई ध्यानमा राख्दै, AI को प्रयोगलाई निश्चित नियमहरूसँग बाँध्न आवश्यक छ। आधिकारिक नियमहरू धेरै रूपहरूमा आउँछन्। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानून, देश कानून, र कम्पनीहरु द्वारा आफ्नै मा सेट नियमहरू छन्। तपाईंको एआई डिप्लोइमेन्ट टोलीसँग अनुपालन अभ्यासहरूको पूर्ण प्राविधिक ज्ञान हुनुपर्छ। यो ज्ञानको साथ हो कि तिनीहरूले तपाईंलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित रहन मद्दत गर्न सक्छन् जब यो AI को प्रयोगको कुरा आउँछ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स आजको व्यापार संसारमा प्रचलनमा रहेको टेक्नोलोजी भएको छ। यस विस्मयकारी प्रविधिको अधिकतम फाइदा लिनको लागि, तपाइँको लागि कुशल एआई डिप्लोइमेन्ट टोली निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि, तपाइँलाई एआई डिप्लोइमेन्ट इन्जिनियरहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्नको लागि कस्ता सीपहरू हुन आवश्यक छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ। यस लेखमा सफल एआई डिप्लोइमेन्टका लागि आवश्यक पर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सीपहरू समावेश छन्। AI इन्जिनियरहरू भर्ती गर्दा तिनीहरूलाई विचार गर्न नबिर्सनुहोस्।